အချစ်ရေး – Shan Ma Lay
မိန္းကေလးေတြ သူတို႔ရဲ႕ခ်စ္သူ ေကာင္ေလးကို ခဏခဏ စိတ္ေကာက္တာ ဒီအခ်က္ေလးေတြေၾကာင့္ပါ ခ်စ္သူ မိန္းကေလးေတြက အေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္ စိတ္ဆိုးတာ မဟုတ္ဘူး ပါေနာ္ ၊ ဒါ‌ ေလးေတြေၾကာင့္မို႔စိတ္ဆိုးတာပါ ကိုကိုတို႔ေရ။ရည္းစားေတြစိတ္ဆိုး ၊ စိတ္ေကာက္ၾကတယ္ဆိုတာ သဘာဝ ပါပဲ။ စိတ္ေကာက္ဖို႔က မိန္းကေလးတာဝန္ ၊ ေခ်ာ့ရမွာက ေကာင္ေလးေတြ တာဝန္ပဲ ဟုတ္တယ္ဟုတ္? ဒါေပမယ့္ ေကာင္မေလး စိတ္ဆိုးေန ခ်ိန္မွာေတာ့ မေခ်ာ့တဲ့အျပင္ `စိတ္ပဲေကာက္ေနတယ္ ၊ အလကားေနရစ္တယ္ ၊ျပႆနာ ရွာတယ္´ လို႔ သြားေျပာရင္ေတာ့ ေလာင္ေနတဲ့မီးကိုေလာင္စာ ပိုထည့္ေပးလိုက္သလိုပဲ ပိုအေျခအေန ဆိုးသြားမယ္ေနာ္ ။ တကယ္ေတာ့ မိန္းကေလးေတြ စိတ္ေကာက္တယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ရွိပါတယ္။အထူးသျဖင့္ဘယ္လို အေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ ရလဲဆိုေတာ့ ၁။ Exအေၾကာင္းရွာေတြ႕လို႔ […]
ချစ်တယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ ကျွန်မအနား မကပ်နဲ့…..
August 8, 2021 aung aungLeaveaComment on ချစ်တယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ ကျွန်မအနား မကပ်နဲ့…..
ချစ်တယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားမကပ်နဲ့… ချစ်တယ်တဲ့အိမ်ဘေးနားကကလေးမုန့်ဝယ်ကျွေးပြီးချစ်တယ်ပြောခိုင်းရင်တောင်ပြောတတ်တာပဲကိုချစ်တယ်ပြော တတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားကိုမကပ်ပါနဲ့အချစ်ဆိုတဲ့အနောက်မှာဂရုစိုက်တတ်ဖို့လဲလိုအပ်သေးတယ်.. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးရင်ပစ်မထားပါနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူကပစ်ထားတဲ့အခါ အတွေးတွေအများကြီးဝင်လာတတ်တယ်ဘာလို့လဲဘာကြောင့်လဲမချစ်တော့ဘူးလားဆိုတာမျိုးတွေအမျိုးမျိုးတွေး နေတတ်တယ်.. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတကယ်နားမလည်ပါပဲနဲ့နားလည်ပါတယ်လို့မပြောနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုသူတော့ငါ့ကို နားလည်ပေးမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မျှော်လင့်ထားပြီးမှလက်တွေ့မှာဘာတစ်ခုကိုမှနားလည်မပေးနိုင်တဲ့အခါပိုပြီး နာကျင်ရတတ်တယ်.. ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပြောဖို့ကဘယ်ခက်ပါ့မလဲဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအနောက်မှာဂရုစိုက်မှုတွေကြင်နာမှုတွေပေးဖို့ လိုအပ်တယ်အမြဲတမ်းအလုပ်များနေတတ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှမချစ်တာကောင်းမယ် မိန်းကလေးဆိုတာကသူနဲနဲလေးအားတာနဲ့သတိရတတ်တာမျိုးလေအဲ့လိုပဲအချိန်ပေးတာကိုလိုချင်တတ်ကြတယ်.. ချစ်တယ်တဲ့ရင်ခုန်သံတွေမပါပဲနဲ့ပြောတဲ့စကားဟာလေထဲမှာပျောက်သွားရုံသက်သက်ပါအဲ့ထက်ပိုပြီးထူးမလာ သလိုရည်းစားတစ်ယောက်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ခံလိုက်ရတာကလွဲလို့ဘာမှထူးမလာဘူးလေ.. ချစ်တယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားကိုကပ်မလာပါနဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်… crd zawgyi ချစ်တယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားမကပ်နဲ့… ချစ်တယ်တဲ့အိမ်ဘေးနားကကလေးမုန့်ဝယ်ကျွေးပြီးချစ်တယ်ပြောခိုင်းရင်တောင်ပြောတတ်တာပဲကိုချစ်တ ယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားကိုမကပ်ပါနဲ့အချစ်ဆိုတဲ့အနောက်မှာဂရုစိုက်တတ်ဖို့ လဲလိုအပ်သေးတယ်.. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးရင်ပစ်မထားပါနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူကပစ်ထားတဲ့အခါ အတွေးတွေအများကြီးဝင်လာတတ်တယ်ဘာလို့လဲဘာကြောင့်လဲမချစ်တော့ဘူးလားဆိုတာမျိုးတွေအမျိုးမျိုးတွေး နေတတ်တယ်.. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတကယ်နားမလည်ပါပဲနဲ့နားလည်ပါတယ်လို့မပြောနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုသူတော့ငါ့ကို နားလည်ပေးမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မျှော်လင့်ထားပြီးမှလက်တွေ့မှာဘာတစ်ခုကိုမှနားလည်မပေးနိုင်တဲ့အခါပိုပြီး နာကျင်ရတတ်တယ်.. ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပြောဖို့ကဘယ်ခက်ပါ့မလဲဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအနောက်မှာဂရုစိုက်မှုတွေကြင်နာမှုတွေပေး ဖို့လိုအပ်တယ်အမြဲတမ်းအလုပ်များနေတတ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှမချစ်တာကောင်းမယ် မိန်းကလေးဆိုတာကသူနဲနဲလေးအားတာနဲ့သတိရတတ်တာမျိုးလေအဲ့လိုပဲအချိန်ပေးတာကိုလိုချင်တတ်ကြတယ်.. ချစ်တယ်တဲ့ရင်ခုန်သံတွေမပါပဲနဲ့ပြောတဲ့စကားဟာလေထဲမှာပျောက်သွားရုံသက်သက်ပါအဲ့ထက်ပိုပြီးထူးမလာ သလိုရည်းစားတစ်ယောက်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ခံလိုက်ရတာကလွဲလို့ဘာမှထူးမလာဘူးလေ.. ချစ်တယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားကိုကပ်မလာပါနဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်… crd ချစ်တယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားမကပ်နဲ့… ချစ်တယ်တဲ့အိမ်ဘေးနားကကလေးမုန့်ဝယ်ကျွေးပြီးချစ်တယ်ပြောခိုင်းရင်တောင်ပြောတတ်တာပဲကိုချစ်တယ်ပြော တတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားကိုမကပ်ပါနဲ့အချစ်ဆိုတဲ့အနောက်မှာဂရုစိုက်တတ်ဖို့လဲလိုအပ်သေးတယ်.. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးရင်ပစ်မထားပါနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူကပစ်ထားတဲ့အခါ အတွေးတွေအများကြီးဝင်လာတတ်တယ်ဘာလို့လဲဘာကြောင့်လဲမချစ်တော့ဘူးလားဆိုတာမျိုးတွေအမျိုးမျိုးတွေး နေတတ်တယ်.. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတကယ်နားမလည်ပါပဲနဲ့နားလည်ပါတယ်လို့မပြောနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုသူတော့ငါ့ကို နားလည်ပေးမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မျှော်လင့်ထားပြီးမှလက်တွေ့မှာဘာတစ်ခုကိုမှနားလည်မပေးနိုင်တဲ့အခါပိုပြီး နာကျင်ရတတ်တယ်.. ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပြောဖို့ကဘယ်ခက်ပါ့မလဲဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအနောက်မှာဂရုစိုက်မှုတွေကြင်နာမှုတွေပေးဖို့ လိုအပ်တယ်အမြဲတမ်းအလုပ်များနေတတ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှမချစ်တာကောင်းမယ် မိန်းကလေးဆိုတာကသူနဲနဲလေးအားတာနဲ့သတိရတတ်တာမျိုးလေအဲ့လိုပဲအချိန်ပေးတာကိုလိုချင်တတ်ကြတယ်.. ချစ်တယ်တဲ့ရင်ခုန်သံတွေမပါပဲနဲ့ပြောတဲ့စကားဟာလေထဲမှာပျောက်သွားရုံသက်သက်ပါအဲ့ထက်ပိုပြီးထူးမလာ သလိုရည်းစားတစ်ယောက်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ခံလိုက်ရတာကလွဲလို့ဘာမှထူးမလာဘူးလေ.. ချစ်တယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားကိုကပ်မလာပါနဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်… crd zawgyi ချစ်တယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားမကပ်နဲ့… ချစ်တယ်တဲ့အိမ်ဘေးနားကကလေးမုန့်ဝယ်ကျွေးပြီးချစ်တယ်ပြောခိုင်းရင်တောင်ပြောတတ်တာပဲကိုချစ်တ ယ်ပြောတတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ကျွန်မအနားကိုမကပ်ပါနဲ့အချစ်ဆိုတဲ့အနောက်မှာဂရုစိုက်တတ်ဖို့ လဲလိုအပ်သေးတယ်.. […]
ချစ်သူရွေးတော့မယ်ဆိုရင် ဘာကိုရှောင်ပီး ဘာကိုဆောင်ရမလဲ……
August 6, 2021 aung aungLeaveaComment on ချစ်သူရွေးတော့မယ်ဆိုရင် ဘာကိုရှောင်ပီး ဘာကိုဆောင်ရမလဲ……
ချစ်သူထားမယ်ဆိုရင်ဘဝအတွက်ချစ်သူရွေးတော့မယ်ဆိုရင်အလှအပသိပ်ကြိုက်တဲ့ချစ်သူမျိုးကိုရှောင်….. သူကြိုက်တာမင်းရဲ့ချောမောလှပမှုကိုပါတစ်နေ့မင်းအလှပျက်သွားတဲ့အချိန်၊တစ်နေ့မင်းမပြင်မဆင်မခြယ်သနိုင်တော့အချိန်သူ့အချစ် တွေပါလိုက်ပျက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်သူကတစ်ခြားသောအလှအပဆီကိုကူးပြောင်းပြီးနောက်အလှတစ်ခုကိုခံစားနေပါလိမ့်မယ်.. ချစ်သူထားတော့မယ်ဆိုရင်တဏှာရာဂ(ခပ်ရိုင်းရိုင်းဒဲ့ပြောရရင် )မင်းခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့မင်းရဲ့ဖွံ့ထွားမှုကိုတပ်မက်တဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ ကြည့်တတ်တဲ့သူကိုရှောင်တစ်ချိန်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုအသည်းအသန်တောင်းခံပြီးတာဝန်မဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့မင်းကိုချန်ထားခဲ့လိမ့်မယ်.. ချစ်သူထားတော့မယ်ဆိုရင်မင်းဆီတစ်ချိန်လုံး sms ပို့ပြီးချစ်တယ်အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားခဏခဏပြောတတ်တဲ့သူကိုရှောင် ချစ်သူစဖြစ်ကာစမို့သာပြောနေတာအချိန်လေးကြာလာတဲ့အမျှချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမင်းကိုပြောဖို့ဝန်လေးနေသလိုအချစ်တွေလည်း လျော့တိလျောရဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်.. ချစ်သူထားတော့မယ်ဆိုရင်အပြစ်တစ်ခုရှိဝန်မခံတတ်ပဲလှည့်ပတ်လိမ်လည်တတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကိုရှောင်မင်းခွင့်လွှတ်နိုင်စရာမရှိတဲ့ကိစ္စ မျိုးကိုတောင်လှလှပပသူလိမ်ပြလိမ့်မယ်ချစ်နေတုန်းမို့မင်းခွင့်လွှတ်ပေမယ့်တစ်ချိန်မင်းကိုထားပြီးဖောက်ပြန်ခြံခုန်လိမ့်မယ်.. ချစ်သူထားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူကိုဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှေ့လက်တွဲရဲတဲ့ချစ်သူမျိုးကိုရှာကိုယ့် လုပ်ရပ်အတွက်တာဝန်ယူစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်းမျိုးကိုရှာ.. လောကမှာဖောက်ပြန်ဖို့ရာလွယ်ကူပေမယ့်သစ္စာရှိဖို့ရာအရမ်းခက်ခဲတယ်အပြစ်ကျုးလွန်ဖို့ရာသိပ်လွယ်ကူပေမယ့်ဝန်ခံတတ်ဖို့ရာအရမ်း ခက်ခဲတယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနှုတ်ဖျားလေးမှာပြောဖို့ရာလွယ်ကူပေမယ့်ကောင်းတူဆိုးဖက်လက်ထပ်ဖို့ရာအရမ်းခက်ခဲတယ်.. crd Zawgyi ချစ်သူရွေးတော့မယ်ဆိုရင်ဘာကိုရှောင်ပီးဘာကိုဆောင်ရမလဲဘဝအတွက်ချစ်သူရွေးတော့မယ်ဆိုရင်အလှအပသိပ်ကြိုက်တဲ့ချစ်သူမျိုး ကိုရှောင်.. သူကြိုက်တာမင်းရဲ့ချောမောလှပမှုကိုပါတစ်နေ့မင်းအလှပျက်သွားတဲ့အချိန်၊တစ်နေ့မင်းမပြင်မဆင်မခြယ်သနိုင်တော့အချိန်သူ့အချစ် တွေပါလိုက်ပျက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်သူကတစ်ခြားသောအလှအပဆီကိုကူးပြောင်းပြီးနောက်အလှတစ်ခုကိုခံစားနေပါလိမ့်မယ်.. ချစ်သူထားတော့မယ်ဆိုရင်တဏှာရာဂ(ခပ်ရိုင်းရိုင်းဒဲ့ပြောရရင် )မင်းခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့မင်းရဲ့ဖွံ့ထွားမှုကိုတပ်မက်တဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ ကြည့်တတ်တဲ့သူကိုရှောင်တစ်ချိန်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုအသည်းအသန်တောင်းခံပြီးတာဝန်မဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့မင်းကိုချန်ထားခဲ့လိမ့်မယ်.. ချစ်သူထားတော့မယ်ဆိုရင်မင်းဆီတစ်ချိန်လုံး sms ပို့ပြီးချစ်တယ်အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားခဏခဏပြောတတ်တဲ့သူကိုရှောင်ချစ်သူစ ဖြစ်ကာစမို့သာပြောနေတာအချိန်လေးကြာလာတဲ့အမျှချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမင်းကိုပြောဖို့ဝန်လေးနေသလိုအချစ်တွေလည်းလျော့တိ လျောရဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်.. ချစ်သူထားတော့မယ်ဆိုရင်အပြစ်တစ်ခုရှိဝန်မခံတတ်ပဲလှည့်ပတ်လိမ်လည်တတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကိုရှောင်မင်းခွင့်လွှတ်နိုင်စရာမရှိတဲ့ကိစ္စ မျိုးကိုတောင်လှလှပပသူလိမ်ပြလိမ့်မယ်ချစ်နေတုန်းမို့မင်းခွင့်လွှတ်ပေမယ့်တစ်ချိန်မင်းကိုထားပြီးဖောက်ပြန်ခြံခုန်လိမ့်မယ်.. ချစ်သူထားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူကိုဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှေ့လက်တွဲရဲတဲ့ချစ်သူမျိုးကိုရှာကိုယ့် လုပ်ရပ်အတွက်တာဝန်ယူစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်းမျိုးကိုရှာ.. လောကမှာဖောက်ပြန်ဖို့ရာလွယ်ကူပေမယ့်သစ္စာရှိဖို့ရာအရမ်းခက်ခဲတယ်အပြစ်ကျုးလွန်ဖို့ရာသိပ်လွယ်ကူပေမယ့်ဝန်ခံတတ်ဖို့ရာအရမ်း ခက်ခဲတယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနှုတ်ဖျားလေးမှာပြောဖို့ရာလွယ်ကူပေမယ့်ကောင်းတူဆိုးဖက်လက်ထပ်ဖို့ရာအရမ်းခက်ခဲတယ်.. crd
နှစ်နဲ့ချီပြီးတွဲလာတဲ့ ချစ်သူ၊စုံတွဲတွေပြတ်ကုန်တာ ဒီကိစ္စတွေကြောင့်ပဲ…
August 6, 2021 aung aungLeaveaComment on နှစ်နဲ့ချီပြီးတွဲလာတဲ့ ချစ်သူ၊စုံတွဲတွေပြတ်ကုန်တာ ဒီကိစ္စတွေကြောင့်ပဲ…
နှစ်နဲ့ချီပြီးတွဲလာတဲ့ချစ်သူ၊စုံတွဲတွေပြတ်ကုန်တာဒီကိစ္စတွေကြောင့်ပဲ…. ချစ်သူသက်တမ်းကြာလာရင်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကပြောစရာရှားလာတယ်ဒါပေါ့သေးသေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်နဲ့ချီပြီးတွဲလာတဲ့ စုံတွဲတွေပြတ်ကုန်တာဒီကိစ္စကြောင့်ပဲဘာပြောရမှန်းမသိတာပြောသမျှတွေကိုအပိုတွေလို့ထင်သွားတာသိပ်အန္တရယ်ကြီးပါတယ်. ဥပမာ–ချစ်သူဖြစ်ကာစဖုန်းပြောရင်ဘယ်နှစ်နာရီကြာလည်းနှစ်နဲ့ချီလာတော့မိနစ်တွေနည်းသွားတယ်လိုရင်းပဲပြောကြတော့တယ် နောက်ပိုင်းဖုန်းခေါ်တာတောင်သိပ်မရှိတော့ဘူးဒါမချစ်တော့တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကနှစ်နဲ့ချီပြီး တွဲလာတာချစ်တာပေါ့ဒါပေမယ့်ဘာပြောရမှန်းမသိတာရယ်. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နေချင်တာရယ်၊ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးတွေလုပ်ချင်တာရယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးစကားမပြောဖြစ်တော့တာပဲချစ်တယ်ဆို တာကိုပြောရမှာတောင်တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်လာတယ်. မပြောဖြစ်ကြရင်းမပြောဖြစ်ကြရင်းနဲ့စိမ်းလာတယ်အဲ့အချိန်ကပြတ်ဖို့အလွယ်ဆုံးအချိန်၊ကြားလူဝင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲမယုံမရှိနဲ့နှစ် တွေအကြာကြီးတွဲလာတဲ့သူတိုင်းဒီ Feeling ကိုသိပါတယ်ဒါသိပ်ရင်းနှီးလာလို့လည်းဖြစ်နိုင်သလို၊ငါပိုင်သွားပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပစ်ထားမိတာ လည်းဖြစ်နိုင်တယ်. အဲ့အခိုက်အတံ့လေးကိုကျော်လွန်သွားပြီဆိုရင်အရမ်းလက်ထပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ပွီးရငျလကျထပျဖို့တိုငျပငျအနာဂတျကို တှေးပှီးအခစွကြတဖနပြှနလြတဆြတလြာမယအြားလုံးအဲ့အခိုကအြတန့လြေးကိုသခွောဂရုတစိုကနြဲ့ငါပဈထားမိပှီလားငါတို့စကား မပွောဖွဈတာမတှေ့ဖွဈတာကွာနပွေီလား. ငါတို့လကထြပဖြို့တိုငပြငသြင့ပြှီလားလို့တှေးပှီးအခငွှးခငွှးညှိနှိုငွးရငွးကှောလွှနွသှားနိုငကွှပါစလေို့ဆုတောငွးပေးလိုကပွါတယ unicode နှစ်နဲ့ချီပြီးတွဲလာတဲ့ချစ်သူ၊စုံတွဲတွေပြတ်ကုန်တာဒီကိစ္စတွေကြောင့်ပဲ…. ချစ်သူသက်တမ်းကြာလာရင်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကပြောစရာရှားလာတယ်ဒါပေါ့သေးသေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်နဲ့ချီပြီးတွဲလာတဲ့ စုံတွဲတွေပြတ်ကုန်တာဒီကိစ္စကြောင့်ပဲဘာပြောရမှန်းမသိတာပြောသမျှတွေကိုအပိုတွေလို့ထင်သွားတာသိပ်အန္တရယ်ကြီးပါတယ်. ဥပမာ–ချစ်သူဖြစ်ကာစဖုန်းပြောရင်ဘယ်နှစ်နာရီကြာလည်းနှစ်နဲ့ချီလာတော့မိနစ်တွေနည်းသွားတယ်လိုရင်းပဲပြောကြတော့တယ် နောက်ပိုင်းဖုန်းခေါ်တာတောင်သိပ်မရှိတော့ဘူးဒါမချစ်တော့တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကနှစ်နဲ့ချီပြီး တွဲလာတာချစ်တာပေါ့ဒါပေမယ့်ဘာပြောရမှန်းမသိတာရယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နေချင်တာရယ်ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးတွေလုပ်ချင်တာ ရယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးစကားမပြောဖြစ်တော့တာပဲ. ချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောရမှာတောင်တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်လာတယ်မပြောဖြစ်ကြရင်းမပြောဖြစ်ကြရင်းနဲ့စိမ်းလာတယ်အဲ့အချိန် ကပြတ်ဖို့အလွယ်ဆုံးအချိန်ကြားလူဝင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲမယုံမရှိနဲ့နှစ်တွေအကြာကြီးတွဲလာတဲ့သူတိုင်းဒီ Feeling ကိုသိပါတယ်ဒါ သိပ်ရင်းနှီးလာလို့လည်းဖြစ်နိုင်သလို၊ငါပိုင်သွားပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပစ်ထားမိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အခိုက်အတံ့လေးကိုကျော်လွန်သွားပြီ ဆိုရင်အရမ်းလက်ထပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်. ပြီးရင်လက်ထပ်ဖို့တိုင်ပင်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးအချစ်ကတဖန်ပြန်လတ်ဆတ်လာမယ်အားလုံးအဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုသေချာဂရုတစိုက် နဲ့ငါပဈထားမိပွီလားငါတို့စကားမပွောဖွဈတာမတှေ့ဖွဈတာကွာနပွေီလားငါတို့လကျထပျဖို့တိုငျပငျသင့ျပွီလားလို့တှေးပွီအခငွြးခ ငွြးညှိနှိုငြးရငြးကွောလြှနသြှားနိုငကြှပါစလေို့ဆုတောငြးပေးလိုကပြါတယနြောျ. crd
Q သောသူ နှင့် ချစ်သောသူကို ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်….
August 6, 2021 aung aungLeaveaComment on Q သောသူ နှင့် ချစ်သောသူကို ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်….
Q သောသူ-ညသန်းခေါင်မင်းဆီဖုန်းဆက်ပြီးညဉ့်နက်သည်အထိဖုန်းပြောတတ်တယ်ချစ်သောသူသင့်ကိုညသိပ်မနက်ဖို့ပြောလိမ့်မယ်. Q သောသူ-သူကမင်းကိုလုပ်စရာရှိတာမလုပ်ခိုင်းဘဲသွားလည်ဖို့ခေါ်လေ့ရှိတယ်…. ချစ်သောသူ-သူကမင်းကိုအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့လောဆော်နေလိမ့်မယ်… Q သောသူ-မင်းနေမကောင်းချိန်မှာ၊နားဝင်ချိုတဲ့စကားတွေပြောပြီးမင်းကိုဂရုစိုက်ပြလိမ့်မယ်… ချစ်သောသူ-မင်းနေမကောင်းချိန်မှာသူ့ဂရုစိုက်မှုတွေကစိတ်ရှုပ်လောက်အောင်ကိုရှိပြီးဆရာဝန်အတင်းသွားကြည့်ခိုင်းတတ်တယ်… Q သောသူ-သူကမင်းကိုစကားအကောင်းတွေပြောပြီးမင်းရဲနှစ်သက်မှုကိုရယူဖို့ကြိုးစားလေ့ရှိတယ်၊မင်းကလဲဒါကိုဘဲမွေ့လျော်နေတတ် တယ်… ချစ်သောသူ-သူပြောသမျှစကားတွေကမင်းကိုဂရုစိုက်တဲ့စကားတွေဖြစ်ပြီးအများအားဖြင့်မင်းကိုအမိန့်ပေးတာမျိုးနဲ့ပြောလေ့ရှိတယ်… Q သောသူ-သူကမင်းအလိုကိုလိုက်တတ်ပြီးမင်းပျော်နေရင်ရပြီ… ချစ်သောသူ-သူကမင်းကိုအမှားအမှန်တွေခွဲခြားပြတတ်ပြီးမင်းကတော့သူ့ကိုတော်တော်လျှာရှည်တတ်သူလို့သတ်မှတ်တတ်တယ်…. Q သောသူ-သူကမင်းကိုအပျော်ဆုံးပေးမယ်လို့ပြောလေ့ရှိတယ်… ချစ်သောသူ-သူကတော့မင်းကိုသူနဲ့အတူရှိနေခြင်းဟာသူ့ရဲ.အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ဆိုတာကိုဘဲကတိပေးလိမ့်မယ်… Q သောသူ-သူကမင်းရဲ.လှုပ်ရှားမှုအသေးစိတ်ကိုသတိထားလိမ့်မယ်၊မင်းမှားတာလုပ်မိရင်တောင်မင်းကိုထောက်ပြမှာမဟုတ်ဘူး… ချစ်သောသူ-သူကမင်းရဲ.လုပ်ပုံကိုင်ပုံကိုသတိထားပြီးဘယ်နေရာမှာမှားနေလဲဆိုတာကိုထောက်ပြလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ရ မယ်၊ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာကိုပြောပြလေ့ရှိတယ်… Q သောသူ-မင်းဘာလုပ်နေသလဲ၊ဘယ်သူနဲ့တွဲနေသလဲဆိုတာကိုဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး… ချစ်သောသူ-မင်းဘာတွေလုပ်နေသလဲ၊ဘယ်သူနဲ့တွဲနေလဲဆိုတာကိုအရမ်းအလေးထားတတ်ပြီးမင်းကိုဘယ်လိုလူတွေနဲ့မပေါင်းသင့်ဘူး ဆိုတာကိုသတိပေးတတ်တယ်… Q သောသူ-သူကအခုချိန်ကိုဘဲစဉ်းစားတယ်… ချစ်သောသူ-သူကရှေ့ရေးကိုတောင်မျှော်မှန်းနေပြီးမင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာကိုတွေးခေါ်တတ်တယ်… Q သောသူ-သူကငါမင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလေ့ရှိတယ်… ချစ်သောသူ-သူကတော့ငါမင်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောတတ်တယ်… တကယ်လို့မင်းသာတစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်ခဲ့ဖူးတယ်သို့မဟုတ်ချစ်ခံခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာတွေဟာသိပ်ကိုမှန်ကန်တယ်လို့ခံစား ရပါလိမ့်မယ်… crd
ရင်နင့်အောင် ချစ်ခဲ့ဖူးသူတွေသာ သိရှိ ခံစားနိုင်မယ့် စိတ်ခံစားမှုအဖြစ်အပျက်များ……
August 6, 2021 aung aungLeaveaComment on ရင်နင့်အောင် ချစ်ခဲ့ဖူးသူတွေသာ သိရှိ ခံစားနိုင်မယ့် စိတ်ခံစားမှုအဖြစ်အပျက်များ……
ရင်နင့်အောင်ချစ်ခဲ့ဖူးသူတွေသာသိရှိခံစားနိုင်မယ့်အဖြစ်အပျက်များချစ်တယ်ဆိုတာကကြိုက်တာနဲ့လုံးဝမတူတာကိုချစ်ဖူးသူတိုင်းသိကြ ပါတယ်။ဘယ်လိုစကားလုံးနဲ့ပြောပြရမယ်မသိလောက်အောင်ကွာခြားပါတယ်… ချစ်ဖူးသူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုမချစ်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့အထူးအဆန်းဖြစ်နေကြမှာပါရည်းစားတွေဘယ်လောက်ထားထားချစ်ဖူးချင်မှချစ် ဖူးကြတာပါချစ်ဖူးတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုသိပြီးကိုယ်ချင်းစာတတ်ကြပါတယ်… 1. စိတ်လှုပ်ရှားတာ ချစ်မိသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ကကိုယ်ချစ်ရသူနဲ့အရမ်းမရင်းနှီးသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။စကားလုံးနဲ့ဖော်ပြလို့မရ တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကပုံမှန်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးဘာမျှော်လင့်ထားလဲမေးရင်ဘာမှမျှော်လင့်ထားလို့မဟုတ်ဘဲကိုယ့် ရှေ့မှာသူရှိနေမှာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တင်စိတ်လှုပ်ရှားစေတာကအချစ်ကြောင့်ပါပဲ… 2. အရမ်းလွမ်းတာ ချစ်မိကြတဲ့သူတိုင်းကအလွမ်းရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားဖူးမှာပါလွမ်းတယ်ဆိုတာသတိရတာထက်ကိုပိုပါတယ်။ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိနဲ့ဘာလုပ် လို့လုပ်ရမှန်းမသိလောက်အောင်လွမ်းတာမျိုးကိုချစ်ကြသူတွေပဲနားလည်ကြတာပါအရမ်းလွမ်းလို့ငိုမိတယ်ဆိုတာဒီအခြေအနေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်… 3. ကြည့်နေရင်းနဲ့ လွမ်းတာ ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူကိုမျက်စိရှေ့မှာမြင်ရတာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိရှေ့မှာကြည့်နေရင်းနဲ့လွမ်းနေမိတာကို လည်းချစ်ဖူးတဲ့သူတွေသာသိကြတာပါကြိုပြီးပဲလွမ်းသလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ပြောရခက်အောင်လွမ်းမိတာမျိုးကိုချစ်ဖူးရင်တော့အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်လောက်တော့ကြုံဖူးကြမှာပါ… 4. ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါ ချစ်ရတဲ့သူကိုဆုံးရှုံးရတဲ့နာကျင်မှုဆိုတာအတော့်ကိုခံစားရခက်ပါတယ်။ချစ်တဲ့သူကကိုယ့်ဆီဘယ်တော့မှရောက်မလာတော့ဘူးသူ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာကိုယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိကလက်မခံချင်စရာကောင်းလှပါတယ်။ဒါကတော့ချစ်ခဲ့ဖူးပြီးအသဲကွဲဖူးသူတွေသာသိတဲ့ အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်.. 5. မချစ်ဘူးဆိုတာကို သိလိုက်ရတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်ကချစ်နေပေမယ့်သူ့ဘက်ကကိုယ့်ကိုမချစ်နေဘူးဆိုတဲ့အသိကရေမရှိတဲ့ဘူးကိုရေရှိတယ်ထင်မိတဲ့အဖြစ်နဲ့ဆင်တူပါတယ်။တ ကယ့်ကိုဟာသွားတဲ့ခံစားချက်ပါပဲကိုယ်ကချစ်နေတာကလည်းပျောက်မသွားသလိုသူကလည်းချစ်မနေဘူးဆိုတာမျှော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်လိုကိုဖြစ်စေတတ်ပါသေးတယ်.. 6. စိတ်ပူခြင်း ချစ်မိတဲ့သူတစ်ယောက်မှာစိတ်ပူပန်ခြင်းဆိုတာအမြဲတွဲကပ်ပါနေတတ်ပါတယ်။ချစ်ရတဲ့သူဝမ်းနည်းနေတာနာကျင်နေတာကိုမြင်နေရတာ ကချစ်မိတဲ့သူအတွက်လည်းနာကျင်မှုပါပဲသူ့အစားကိုယ်သာခံစားပေးချင်လောက်အောင်စိတ်ပူမိတာကလည်းချစ်မိလို့ပါပဲသူတစ်ခုခုများ ဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့တွေးပူမိခြင်းကလည်းအတော့်ကိုနေမထိထိုင်မသာဖြစ်စေတတ်တဲ့ခံစားမှုပါပဲ.. crd……
ဘဝမှာ မရှိသင့်ခဲ့တဲ့ သူတွေအတွက် မခံစားပါနဲ့….
August 6, 2021 aung aungLeaveaComment on ဘဝမှာ မရှိသင့်ခဲ့တဲ့ သူတွေအတွက် မခံစားပါနဲ့….
ဘဝမှာမရှိသင့ခြဲ့တဲ့သူတှအတှေကြမခံစားပါနဲ့… ကိုယ့ဘြဝမှာလုံးဝမရှိသင့တြဲ့လူမွိုးတှေရှိပါတယြလူတိုငြးလညြးအဲဒီလိူလူမွိုးကှုံဖူးကှမယထြငပြါတယြအဲဒီလိုလူတှဟောသူစိမြးမှမ ဟုတပြါဘူးမိသားစုထဲမှာလညြးရှိတတပြါတယြကိုယ့ပြတဝြနြးကငွမြှာလညြးရှိတတပြါတယြကိုယနြဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနသေူမွိုးလညြးဖှဈ နိုငပွါတယွစာလေးတဈပုဒဖွတမွိလိုကရွာကနတှေေးမိသှားတာပါပဲအမုနွးဆုံးလူဆိုတာမရှိဘူးတဲ့.. မပတသြကခြဲ့ရငကြောငြးမယဆြိုတဲ့လူမွိုးပဲရှိတယဆြိုတဲ့စာသားလေးကိုမှတမြိနပေါတယြဘဝမှာမရှိသင့တြဲ့လူဆိုတာလညြးအဲဒီ့ သဘောတရားပါပဲကိုယ့အွတှကမွဟုတပွမယေ့ွအခှအနအေကှေောငွးကှောင့ပွတသွကရွတယွ၊ဒါပမယေ့တွကယတွမွးကမရှိသ င့တြဲ့လူတှပေါတခါတလေဘဝမှာအဲဒီလိုလူတှကေသင့ကြိုအာရုံနောကအြောငြအလုပနြိုငဆြုံးလူတှထေဲမှာပါပါတယြ. မရှိသင့ပြမယေ့ြရှိနတေဲ့အခါကိုယ့ကြိုအမွိုးမွိုးအာရုံနောကစြပေါတယြဒုကျခပေးနိုငပြါတယြစိတအြနှောင့အြယှကဖြှဈစတေဲ့လူတှ ပေါပဲမရှိသင့တြာမှနပြမယေ့ြရှိနတယြေ။ပှတသြားစှာစှန့လြှှတပြဈလိုကလြို့လညြးမရဘူးဆိုတဲ့အခှအနေမွေိုးကိုကှုံဖူးကှမယထြင ပွါတယွအဲဒီလိုလူတှအတှကွေအရမွးအာရုံနောကလွာလို့ကိုယ့ကွိုကိုယရွောစိတပွါထိခိုကလွာတဲ့အခါသင့ကွိုယသွငသွခှောပှန တြှေးကှည့ပြါ. ကိုယ့အြတှကြကောငြးကွိုးတဈစကမြှမပေးတဲ့လူအတှကြကိုယကြပူလောငနြလေို့ခံစားနလေို့ဘာအကွိုးရှိမှာလဲဘာတှတေိုးတကသြှား မှာလဲကိုယ့အွတါကွဆုတယွုတမွှုသာတိုးလာမှာပါအဲဒီလိုလူတှကသေင့ရွညမွှနွးခကှကွိုလညွးဝဝေါးစနေိုငပွါတယွသင့ဘွဝကိုလ ညြးဆုတယြုတစြပေါတယြအခွိနကြှာကှာပတသြကလြလေေသင့ဘြဝဆုတယြုတလြလဖှေဈေမှာပါ. အဲဒါကှောင့ြအဲဒီလိုလူတှကေိုပှတသြားစှာထားခဲ့ဖို့ခပဝြေးဝေးနဖေို့ကှိုးစားရမှာနံပါတတြဈပါကိုယလြုပစြရာရှိတာဆကလြုပသြှားရ မှာကပါတနြှဈပါသငကြအဲဒီလိုသင့ဘြဝမှာမရှိသင့ဘြဲရှိနတေဲ့လူတှနေဲ့ခပဝြေးဝေးနလေို့မဖှဈနိုငဘြူးဆိုရငသြူတို့ကိုသင့စြိတထြဲကန သောblockထားလိုကပြါသူတို့ဘာလုပလြုပမြခံစားဘူးလို့ကိုယ့ကြိုယကြိုယနြေ့တိုငြးသတိပေးပါ. သငလြုပစြရာရှိတာကိုသာတစိုကမြတမြတဆြကလြုပသြှားဖို့ကသငလြုပနြိုငတြဲ့ကိဈစပါပဲဘဝမှာကှုံလာရတဲ့လူတိုငြးကသင့ကြိုတ ဈခုခုပေးသှားပါတယွယူတတရွငလွညွး သင့အွတှကတွနဖွိုးရှိတာကိုသငရွသှားပါတယွ“Good people give you happiness. Bad people give youexperience. Worst people give youalesson. And best people give you memories.”. လူကောငွးတှကသေင့ကွိုပှောရွှှငစွတယွလေူဆိုးတှကသေင့ကွိုသငခွနွးစာပေးတယွအကောငွးဆုံးလူတှကတေော့သင့ကွိုအမှ တတွရမှတဉွာဏတွှပေေးသှားတာပဲပေါ့အဲဒီ့တော့ကိုယ့ဘွဝမှာမရှိသင့တွဲ့လူတှရေဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အကငှ့စွရိုကွအပှုအမူလုပရွပမွှိုးကိုယ တွိုငကွသူမှားကိုမလုပမွိအောငွသငခွနွးစာယူပါမလုပမွိအောငကွှိုးစားပါသူတို့ကိုသငမွပှုပှငနွိုငရွငွမပှုပှငဘွဲသင့ကွိုယသွငသွာ ပှုပှငလြိုကပြါ. If you don’t like something, change it. If you can’t change […]
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အချစ်စစ်ဆိုတာ ရှားပါးတဲ့ အရာတခု ဖြစ်နေပြီလား…..
August 6, 2021 aung aungLeaveaComment on ဒီနေ့ခေတ်မှာ အချစ်စစ်ဆိုတာ ရှားပါးတဲ့ အရာတခု ဖြစ်နေပြီလား…..
မခူးရက်တဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုအရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ထိုင်ကြည့်နေသလိုမြတ်နိုးမှုမျိုးနဲ့ချစ်ဖို့ဆိုတာဟာသတစ်ပုဒ်လိုတောင်ဖြစ်နေပြီ…+ ရည်းစားထားတာအလှထိုင်ကြည့်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲကိုယ်မစားလည်းသူများစားမှာပဲဆိုတာတွေကပါသေးတယ်သူများသုံးပြီးသား ညစ်နွမ်းနေတဲ့ပုဝါလိုမျိုးအရင်လူနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းလိုတန်ဖိုးထားနေလည်းအလကားပဲဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဒီလို ခေတ်ထဲမှာမိန်းမဖြစ်ရတာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကသူတို့လိုအပ်တာကိုပိုက်ဆံပေးပြီးဝယ်တယ်.. တမင်ယုတ်မာတဲ့သူတွေကအချစ်ဆိုတာကိုအသုံးချပြီးကိုယ်လိုချင်တာကိုရအောင်ယူတယ်၊ကတိတွေပေးတယ်မျှော်လင့်ချက်တွေပေး တယ်တစ်ဖက်မိန်းကလေးရဲ့အနာဂတ်တွေကိုအိပ်မက်တွေပေးပြီးစိတ်ကြိုက်ခြယ်လှယ်နေတာပြည့်တန်ဆာနဲ့အိပ်တတ်တဲ့ယောက်ျား တွေကမယုတ်မာဘူးတန်ရာတန်ကြေးပေးပြီးသူတို့လိုအပ်တာကိုဝယ်တာ၊ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအတူအိပ်ချင်ကြတဲ့ယောက်ျားတွေကတော့ပို ပြီးယုတ်မာတယ်.. ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုတဲ့အပြင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝရောနှလုံးသားရောသေအောင်သတ်သွားတာမျိုးပေါ့၊မိန်းခလေးဖြစ်ပြီးအညှာလွယ် တာကိုးအယုံလွယ်တာကိုးလို့ပစ်စလတ်ခတ်ပြောချင်ရင်ကိုယ်တိုင်ကရောတကယ်ချစ်ရင်ဘဝပေးပြီးသက်သေပြပါလို့ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ပြီးသွားတော့မှအရင်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့မျှနွားအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ရှောင်ထွက်မယ်ဆိုလည်းအစတည်းကအခွင့် အရေးမယူကြနဲ့.. ပြောချင်တာကမိန်းခလေးတစ်ယောက်ကိုတကယ်မချစ်ပဲအသုံးမချပါနဲ့မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်ပါတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်ပါမိန်းမသားတွေ ကိုကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာအားးနွဲ့တဲ့လူသားတွေလို့မြင်ပါကိုယ့်ကိုအားကိုးတတ်တဲ့ကိုယ့်ညီမလေးတွေလိုမြင်ပါဘယ်လိုပဲရင်ဘောင်တန်းပါ စေမိန်းမကမိန်းမပါပဲတခြားအရာတွေယှဉ်လို့ရချင်ရမယ်ကြေလွယ်နွမ်းလွယ်တဲ့နေရာမှာတော့မယှဉ်နိုင်အောင်ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်.. ခြေသုတ်ပုဝါလို့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဝါတစ်ခုကိုခြေသုတ်တာကိုယ့်အပစ်မဟုတ်ဘူးလက်ကိုင်ပုဝါတစ်ခုကိုခြေသုတ်ပြီးနောက်လူ တွေပါထပ်သုတ်အောင်စွန့်ပစ်ခဲ့ရင်တော့ကိုယ့်အပြစ်ဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ကြောင့်ညစ်နွမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီလက်ကိုင်ပုဝါလေးကိုလွှတ် မချပဲတစ်သက်လုံးမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့တန်ဖိုးထားသိမ်းဆည်းတတ်ပါစေ.. unicode မခူးရက်တဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုအရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ထိုင်ကြည့်နေသလိုမြတ်နိုးမှုမျိုးနဲ့ချစ်ဖို့ဆိုတာဟာသတစ်ပုဒ်လိုတောင်ဖြစ်နေပြီ… ရည်းစားထားတာအလှထိုင်ကြည့်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲကိုယ်မစားလည်းသူများစားမှာပဲဆိုတာတွေကပါသေးတယ်သူများသုံးပြီးသား ညစ်နွမ်းနေတဲ့ပုဝါလိုမျိုးအရင်လူနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းလိုတန်ဖိုးထားနေလည်းအလကားပဲဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဒီလို ခေတ်ထဲမှာမိန်းမဖြစ်ရတာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကသူတို့လိုအပ်တာကိုပိုက်ဆံပေးပြီးဝယ်တယ်တမင် ယုတ်မာတဲ့သူတွေကအချစ်ဆိုတာကိုအသုံးချပြီးကိုယ်လိုချင်တာကိုရအောင်ယူတယ်.. ကတိတွေပေးတယ်မျှော်လင့်ချက်တွေပေးတယ်တစ်ဖက်မိန်းကလေးရဲ့အနာဂတ်တွေကိုအိပ်မက်တွေပေးပြီးစိတ်ကြိုက်ခြယ်လှယ်နေ တာပြည့်တန်ဆာနဲ့အိပ်တတ်တဲ့ယောက်ျားတွေကမယုတ်မာဘူးတန်ရာတန်ကြေးပေးပြီးသူတို့လိုအပ်တာကိုဝယ်တာချစ်ပါတယ်ဆိုပြီး အတူအိပ်ချင်ကြတဲ့ယောက်ျားတွေကတော့ပိုပြီးယုတ်မာတယ်ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုတဲ့အပြင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝရောနှလုံးသားရောသေ အောင်သတ်သွားတာမျိုးပေါ့.. မိန်းခလေးဖြစ်ပြီးအညှာလွယ်တာကိုးအယုံလွယ်တာကိုးလို့ပစ်စလတ်ခတ်ပြောချင်ရင်ကိုယ်တိုင်ကရောတကယ်ချစ်ရင်ဘဝပေးပြီး သက်သေပြပါလို့ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးသွားတော့မှအရင်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့မျှနွားအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ရှောင်ထွက် မယ်ဆိုလည်းအစတည်းကအခွင့်အရေးမယူကြနဲ့ပြောချင်တာကမိန်းခလေးတစ်ယောက်ကိုတကယ်မချစ်ပဲအသုံးမချပါနဲ့၊မြတ်နိုးတဲ့စိတ် နဲ့ချစ်ပါတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်ပါ.. မိန်းမသားတွေကိုကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာအားနွဲ့တဲ့လူသားတွေလို့မြင်ပါကိုယ့်ကိုအားကိုးတတ်တဲ့ကိုယ့်ညီမလေးတွေလိုမြင်ပါဘယ်လိုပဲရင် ဘောင်တန်းပါစေမိန်းမကမိန်းမပါပဲတခြားအရာတွေယှဉ်လို့ရချင်ရမယ်ကြေလွယ်နွမ်းလွယ်တဲ့နေရာမှာတော့မယှဉ်နိုင်အောင်ထိခိုက် လွယ်ပါတယ်ခြေသုတ်ပုဝါလို့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဝါတစ်ခုကိုခြေသုတ်တာကိုယ့်အပစ်မဟုတ်ဘူးလက်ကိုင်ပုဝါတစ်ခုကိုခြေသုတ် ပြီးနောက်လူတွေပါထပ်သုတ်အောင်စွန့်ပစ်ခဲ့ရင်တော့ကိုယ့်အပြစ်ဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ကြောင့်ညစ်နွမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီလက်ကိုင်ပုဝါ လေးကိုလွှတ်မချပဲတစ်သက်လုံးမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့တန်ဖိုးထားသိမ်းဆည်းတတ်ပါစေ.. crd
August 6, 2021 aung aungLeaveaComment on မိန်းခလေးတွေအချစ်ကိုစိတ်ကုန်သွားတဲ့အခါ……
မိန်းခလေးတွေအချစ်ကိုစိတ်ကုန်သွားတဲ့အခါ (1)-ဂရုစိုက်မှုလေးပေးဖို့အောက်ကျခံပြီးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူး (မှန်တစ်ချပ်လိုတုံ့ပြန်လိုက်ဖို့ဘဲသူဆုံးဖြတ်လိုက်လိမ့်မယ်) (2)-ဖုန်းတွေတဂွမ်ဂွမ်ဆက်မက်ဆေ့ခ်ျတွေတဒေါင်ဒေါင်ပို့အားအားယားယားအလုပ်တွေဆက်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး (သူ့ဘာသူ Online လေးတက် Facebook လေးသုံးနဲ့သာယာတဲ့ဘဝလေးမှာဘဲနေနေလိမ့်မယ်) (3)-အရည်မရအဖတ်မရစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်အလုပ်တွေစကားနိုင်လုတာတွေငြင်းခုန်တာတွေလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး (ပြီးပြီးရောခေါင်းညိတ်လိုက်တာတွေစကားယှဉ်မပြောတော့ဘဲအသာလေးရှောင်ထွက်သွားတာတွေရေငုံနှုတ်ဆိတ်နဲ့Silent talkတွေဘဲ သူလုပ်လာလိမ့်မယ်) (4)-သာလိကာလေးလိုပကျိပကျိနဲ့ရေပက်မဝင်အောင်စကားတွေအသေအလဲပြောပြီးတွယ်ကပ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူး (မေးထူးခေါ်ပြောအဆင့်ထက်ပိုဖို့မရှိတော့တာသေချာပြီလေ) (5)-Jealous ဖြစ်တာတွေဟိုဟာမလုပ်နဲ့ဒီဟာမလုပ်နဲ့ချုပ်ချယ်တာတွေရှိလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး (သူ့ဘဝလေးနဲ့သူဘဲနေတတ်အောင်နေလိမ့်မယ်ဘယ်သွားသွားဘာလုပ်လုပ်စိတ်ပူတာတွေရပ်တန်းကရပ်ပစ်လိုက်လိမ့်မယ်) (6)-BFFတွေကိုအရင်ကထက်ပိုတွယ်တာပိုပြီးချစ်လာလိမ့်မယ် (လွတ်လပ်ပြီးအပူအပင်ကင်းတဲ့ Free style ဘဝလေးကိုပြန်ရဖို့ဘဲသူကြိုးစားလာလိမ့်မယ်) (7)-သင်ကသူ့ကိုချစ်ချစ်မချစ်ချစ်စိတ်ကိုဝင်စားမှာမဟုတ်တော့ဘူး (သူ့ကိုယ်သူဘဲချစ်တတ်သွားလိမ့်မယ်အရင်ကထက်ပိုပြီးလှပပြည့်စုံတဲ့မိန်းခလေးဖြစ်ဖို့ဘဲသူလုပ်လာလိမ့်မယ်) (8)-သင့်ဘက်ကလမ်းခွဲစကားပြောလည်းရင်တုန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး (သူမဘဝထဲကနေသင့်ကိုအပြီးအပိုင်ထုတ်ပစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ Reason အချို့သူ့ဆီမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်နေလို့ဘဲလေ) အနားမှာရှိနေတုန်းတန်ဖိုးထားချစ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့သူတို့တွေကဆီလီကွန်အရုပ်မတွေမှမဟုတ်ဘဲလေချစ်ရင်သူများထက်ပိုချစ်တတ်ကြ တယ်စိတ်နာသွားပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ပြတ်သားချက်… ZawGyi မိန်းခလေးတွေအချစ်ကိုစိတ်ကုန်သွားတဲ့အခါ… (1)-ဂရုစိုက်မှုလေးပေးဖို့ အောက်ကျခံပြီးတောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူး (မှန်တစ်ချပ်လိုတုံ့ပြန်လိုက်ဖို့ဘဲသူဆုံးဖြတ်လိုက်လိမ့်မယ်) (2)-ဖုန်းတွေတဂွမ်ဂွမ်ဆက်မက်ဆေ့ခ်ျတွေတဒေါင်ဒေါင်ပို့အားအားယားယားအလုပ်တွေဆက်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး (သူ့ဘာသူ Online လေးတက် Facebook လေးသုံးနဲ့သာယာတဲ့ဘဝလေးမှာဘဲနေနေလိမ့်မယ်) (3)-အရည်မရအဖတ်မရစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်အလုပ်တွေစကားနိုင်လုတာတွေ ငြင်းခုန်တာတွေလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး (ပြီးပြီးရောခေါင်းညိတ်လိုက်တာတွေစကားယှဉ်မပြောတော့ဘဲအသာလေးရှောင်ထွက်သွားတာတွေရငုံနှုတ်ဆိတ်နဲ့Silenttalkတွဘဲ သူလုပ်လာလိမ့်မယ်) (4)-သာလိကာလေးလိုပကျိပကျိနဲ့ ရေပက်မဝင်အောင်စကားတွေအသေအလဲပြောပြီးတွယ်ကပ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူး ( မေးထူးခေါ်ပြောအဆင့်ထက်ပိုဖို့မရှိတော့တာ သေချာပြီလေ) (5)-Jealous ဖြစ်တာတွေဟိုဟာမလုပ်နဲ့ဒီဟာမလုပ်နဲ့ချုပ်ချယ်တာတွေရှိလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး […]
ချစ်တာ နဲ့ သံယောဇဉ် ရှိတာ မတူဘူး…
August 6, 2021 aung aungLeaveaComment on ချစ်တာ နဲ့ သံယောဇဉ် ရှိတာ မတူဘူး…
ချစ်တာနဲ့သံယောဇဉ်ရှိတာမတူဘူး….. ချစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခဏလေးတွေ့လိုက်ချိန်အတွင်းမှာပဲလူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိသွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ချစ်မိနေပြီးမနက်ဖြန်မှာချက်ချင်းပဲမ ချစ်နိုင်တော့တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်.. “သံယောဇဉ်”ဆိုတာကချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုလေးနက်တယ်တည်ဆောက်ရတဲ့ကာလကလည်းကြာတယ်လူနှစ်ယောက်မချစ်ပဲနဲ့လည်း သံယောဇဉ်ကြောင့်လက်ထပ်သွားကြတာလည်းရှိတယ်.. သံယောဇဉ်က“ချစ်တယ်” ဆိုတာလိုမျိုးအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဒီနေ့ “သံယောဇဉ်” ရှိလည်းနောက်နေ့နောက်နေ့ပေါင်းများစွာလည်းရှိမှာပဲ မုန်းနေရင်တောင်“သံယောဇဉ်” ကြောင့်စိတ်ထဲတွေးမိပြီးသတိရနေမှာပဲ.. အဲ့တော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်တာအပြင်သံယောဇဉ်ရှိသွားရင်ဘယ်သူဖြတ်ဖြတ်မပြတ်ကြတာများတယ်ပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိ တောင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သေရာပါမမေ့နိုင်ကြတာများတယ်.. “သံယောဇဉ်” ဆိုတာက “ချစ်တယ်”ဆိုတာထက်ပိုလေးနက်သလိုပိုပြီးလည်းဖြတ်တောက်ရခက်တဲ့ကြိုးပါLDRS ဘဝမှာအချစ်တစ်ခု တည်းနဲ့မတည်မြဲပါဘူးသံယောဇဉ်တွေနဲ့ရစ်ပတ်မှဒီကြိုးကခိုင်မှာပါ.. ကျွန်မကတော့လူတစ်ယောက်ကို“သံယောဇဉ်” အပြင် ” ချစ်တယ်” ဆိုတာထက်ပိုပြီးချစ်တတ်တဲ့လူအမျိုးအစားထဲမှာပါတော့ခံစားရရင် လည်းသူများထက် ၃ ဆလောက်ပိုတယ်.. ZawGyi ချစ်တယ် နဲ့သံယောဇဉ်ရှိတာမတူဘူးချစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခဏလေး တွေ့လိုက်ချိန်အတွင်းမှာပဲလူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိသွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ချစ်မိနြေ ပီးမနက်ဖြန်မှာချက်ချင်းပဲမချစ်နိုင်တော့တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်.. “သံယောဇဉ်” ဆိုတာကချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုလေးနက်တယ်တည်ဆောက်ရတဲ့ကာလကလည်းကြာတယ်လူနှစ်ယောက်မချစ်ပဲနဲ့လည်း သံယောဇဉ်ကြောင့်လက်ထပ်သွားတြာလည်းရှိတယ်.. သံယောဇဉ်က“ချစ်တယ်” ဆိုတာလိုမျိုးအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဒီနေ့ “သံယောဇဉ်” ရှိလည်းနောက်နေ့နောက် နေ့ပေါင်းများ စွာလည်းရှိမှာပဲမုန်းနေရင်တောင်“သံယောဇဉ်” ကြောင့်စိတ်ထဲ တွေးမိပြီးသတိရနေမှာပဲ.. အဲ့တော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်တာအပြင်သံယောဇဉ်ရှိသွားရင်ဘယ်သူ ဖြတ်ဖြတ်မပြတ်ကြတာများတယ်ပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိတောင်တ စ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သေရာပါမမေ့နိုင်ကြတာများတယ်“သံယောဇဉ်” ဆိုတာက “ချစ်တယ်”ဆိုတာထက်ပိုလေးနက်သလိုပိုပြီးလ ည်း ဖြတ်တောက်ရခက်တဲ့ကြိုးပါ.. LDRS ဘဝမှာအချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့မတည်မြဲပါဘူးသံယောဇဉ်တွေနဲ့ရစ်ပတ်မှဒီကြိုးကခိုင်မှာပါကျွန်မကတော့လူတစ်ယောက်ကို “သံယောဇဉ်” အပြင် […]